Monday May 08, 2017 - 07:15:31 in Wararka by Super Admin
Abu Osama ayaa sheegay in weerarkii Daarusalaam uu banaanka soo dhigay fashilka ciidamada shisheeye ee duullaanka kusoo qaaday dalka Soomaaliya.
Waaliga Sh/Hoose ayaa bogaadiyay ciidamada Mujaahidiinta ee sida adag uga hortagay duullaanka gardarrada ah oo ay ciidamo Mareykan iyo AMISOM kusoo qaadeen deegaanno iyo degmooyin Sh/Hoose katirsan.
Sababta ay Mareykanka iyo AMISOM ugusoo duuleen Sh/Hoose ayuu ku sifeeyay laba arrimood 1- gobolka oo ay ka furanyihiin Maxkamado islaami ah oo dadka si cadaalad ah ugu kala garqaada islamarkaana kumanaan katirsan shacabka Muqdisho ay usoo xukun tagaan 2-gobolka oo ku dhow magaalada caasimadda ah islamarkaana leh kheyraad dhan walba ah.
Sheekh Abu Osama ayaan soo hadal qaadin warkii shalay kasoo baxay wasaaradda Warfaafinta DF-ka ee sheegayay in Abu Osama lagu dilay Weerarkii Daarusalaam.
Mas'uuliyiinta Dowladda Federaalka ayaa caan ku ah faafinta beenta iyo wararka aan laga fiirsan iyadoona warfaafinta Afka dowladda ay noqotay mid caadaysatay beenta sidaas ayayna ku lumiyeen sumcaddii warbaahin lagu yaqiin.
Halkan ka degso Wareysiga Abuu Osama